Ihe mere anyị ji hụ matraasi na isi iyi
Ndị otu England efuola oge iri isii na isii nke ikpeazụ, Mulel na-agbaghara onye na-emegide ya abụọ nkeji abụọ gara aga, n'ihi na ndị mmeri na-enweghị atụ Real Madrid, ya na 3-na mbụ Bernabeu. Onye Midfiel Brazil kwuru na mbụ na ọkara nke abụọ iji mezue ezigbo Madrid \_ 'Slọghachi na nke abụọ nke ọkara nke ọkara nke abụọ
Anya dị ka ọ .ụ. O tinyere nke ochie n'otu ebe. Tingnọdụ ala, m nwere ike icheta nna nna m. Mgbe e mesịrị, ọ gwara m na ọ bụghị oche ga-echetara gị ya. O kwuru eziokwu. Nke ahụ na-echeta ya ka ọ nọ ọdụ n'oche. ọ bụ ebe nchekwa m.